ယနေ့ဂေဟာကသားသမီးတွေနဲ့အတူ သံဃာအပါး(၂၀၀)ကို နှစ်ဦးဆွမ်းကပ်အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ – Shwe Myanmar
ယနေ့ဂေဟာကသားသမီးတွေနဲ့အတူ သံဃာအပါး(၂၀၀)ကို နှစ်ဦးဆွမ်းကပ်အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
တစ်ချိန်က ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းစွဲ မင်းသမီလေး ခိုင်နှင်းဝေက ကိုယ်ကျိုးကိုမကြည့်ပဲ ပြည်သူ့အကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေကို စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေက ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေနဲ့ မိဘမဲ့ကလေးငယ်လေးများအတွက်လည်း ဂေဟာလေး ဖွင့်လှစ်ထားပြီး တစ်ဖက်မှာလည်း မိသားစုအတွက် ဦးဆောင်နေတဲ့
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်းရော အချင်းပါပြည့်စုံတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ သူမရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ယုံကြည်အားထားခြင်းခံရသူတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ စိတ်ထားလေးကောင်းသလို အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာ လှူဒါန်းတတ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေက ဒီကနေ့မှာလည်း သူမရဲ့ ဂေဟာက သားသမီးတွေနဲ့အတူတူ
ရေစက်ချအလှူလေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြောလာပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေက “ဘဝတပါး ကူးပြောင်းသွားသော ခုနှစ်ရက် သားသမီးအလှူရှင် များအား ရည်စူး၍ သံဃာ အပါး (၂၀၀)အား ဆွမ်း၊ ခဲဘွယ်၊ အလှုငွေ များ ကပ်လှု ပူဇော်ခြင်း ကို ကျမ တို့ “ခိုင်” မိသားစု နှင့် ခုနှစ်ရက် သားသမီး အလှူရှင်များ မှ နှစ်ဦး အလှူ အဖြစ် ရေစက်ချ လှူဒါန်း ကုသိုလ်ယူ အမျှဝေ ခဲ့ပါတယ် ရှင်. ဆိုပြီး သူမတို့ မိသားစုရဲ့ ကုသိုလ်လေးကို
မျှဝေပေးလာပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ သူမရဲ့ ဂေဟာက ကလေးတွေနဲ့အတူတူ အလှူလုပ်ရေစက်ချခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ခိုင်နှင်းဝေတို့ မိသားစုရဲ့ နှစ်ဦးအလှူလေးကို ထပ်တူသာဓုခေါ်ဆိုပေးကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
တဈခြိနျက ပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးစှဲ မငျးသမီလေး ခိုငျနှငျးဝကေ ကိုယျကြိုးကိုမကွညျ့ပဲ ပွညျသူ့အကြိုးပွု လုပျငနျးတှကေို စှမျးစှမျးတမံ လုပျကိုငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝကေ ပရဟိတလုပျငနျးတှနေဲ့ မိဘမဲ့ကလေးငယျလေးမြားအတှကျလညျး ဂဟောလေး ဖှငျ့လှဈထားပွီး တဈဖကျမှာလညျး မိသားစုအတှကျ ဦးဆောငျနတေဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဆငျးရော အခငျြးပါပွညျ့စုံတဲ့
ခိုငျနှငျးဝကေတော့ သူမရဲ့ ဝနျထမျးတှအေတှကျလညျး ခေါငျးဆောငျကောငျးတဈယောကျဖွဈပွီး ယုံကွညျအားထားခွငျးခံရသူတဈယောကျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ စိတျထားလေးကောငျးသလို အလှူရစေကျ လကျနဲ့မကှာ လှူဒါနျးတတျတဲ့ ခိုငျနှငျးဝကေ ဒီကနမှေ့ာလညျး သူမရဲ့ ဂဟောက သားသမီးတှနေဲ့အတူတူ ရစေကျခအြလှူလေးတဈခုပွုလုပျခဲ့ကွောငျး ပွောလာပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝကေ
“ဘဝတပါး ကူးပွောငျးသှားသော ခုနှဈရကျ သားသမီးအလှူရှငျ မြားအား ရညျစူး၍ သံဃာ အပါး (၂၀၀)အား ဆှမျး၊ ခဲဘှယျ၊ အလှုငှေ မြား ကပျလှု ပူဇျောခွငျး ကို ကမြ တို့ “ခိုငျ” မိသားစု နှငျ့ ခုနှဈရကျ သားသမီး အလှူရှငျမြား မှ နှဈဦး အလှူ အဖွဈ ရစေကျခြ လှူဒါနျး ကုသိုလျယူ အမြှဝေ ခဲ့ပါတယျ ရှငျ. ဆိုပွီး သူမတို့ မိသားစုရဲ့ ကုသိုလျလေးကို မြှဝပေေးလာပါတယျ။
ခိုငျနှငျးဝကေတော့ သူမရဲ့ ဂဟောက ကလေးတှနေဲ့အတူတူ အလှူလုပျရစေကျခခြဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ခိုငျနှငျးဝတေို့ မိသားစုရဲ့ နှဈဦးအလှူလေးကို ထပျတူသာဓုချေါဆိုပေးကွပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
သမီးနဲ့သားမက် ပေါင်းပြီးလမ်းဘေးတွင်စွန့်ပစ်သွားသော ၈၅ နှစ်အရွယ်အမေအို